March 30, 2016 – Taliyaha ciidamada Puntland Gen. Siciid Maxamed Xersi (Siciid Dheere) ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kadib markii uu dhamaaday dagaalkii ka qarxay deeganada Xeebaha halkaas oo ay ku dagaalameen dagaalyahanada Al Shabaab iyo Ciidanka Puntland.
Jeneral Siciid Dheere wuxuu ku sugnaa jiida hore ee dagaalka aagga Garacad, halkaasi oo uu ka hagaayay ciidankii Puntland ee Shabaab halkaasi kula dagaalamay.
Waxaana Magaalada Garoowe maanta lagu soo dhaweeyay Jeneral Siciid Dheere iyo qaar ka tirsan ciidankii ka qayb qaatay dagaalkii Shabaab looga saaray deeganada Puntland.
Guddoomiyaha Gobalka Nugaal, Cumar Cabdulaahi Faraweyne iyo qaar ka mid ah saraakiisha oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Jeneraal Siciid Dheere uu mudan yahay soo dhawayn iyo wax ka badan, isla markasna uu yahay muwaadin xili kasta u taagan sidii cadowga shacabka looga dhicin lahaa.
Gen.Saciid ayaa dhankiisa si weyn ugu mahadceliyay shacabka reer Puntland ee ka qayb qaatay dagaalkii qaraaraa ee Shabaab looga sifeeyay deeganada Puntland.
Wuxuu sheegay shacabka Puntland ay dagaalka ka qaateen kaalin wax ku ool ah oo ku aadan Shabaabkii lagula dagaalamay dhul xeebeedka Puntland.